Trash (2014) | MM Movie Store
အမှိုကျပုံက ဇာတျလမျးတဈပုဒျ… အမှိုကျပုံမှာစပွီး ဘယျမှာဆုံးမယျဆိုတာတော့….ဒီဇာတျလမျးရဲ့ အဓိက ဇာတျလိုကျတှကေတော့ အမှိုကျပုံက ပွနျအသုံးဝငျမယျ့ ရောငျးလို့ရမယျ့ ပစ်စညျးလေးတှကေို ရှာဖှရေငျး အသကျမှေးဝမျးကွောငျးပွုနတေဲ့ အသကျ(၁၄)နှဈအရှယျ Raphael, Gardo, နဲ့ Rat လို့ အမညျရတဲ့ ကောငျလေး(၃)ယောကျပါ။
Raphael, Gardo, နဲ့ Rat တို့ဟာ တဈမွို့လုံးရဲ့ အမှိုကျမြားလာရောကျစုပုံရာ အမှိုကျပုံ အနီးအနားမှာ ကြူးကြျောနထေိုငျလကျြရှိကွတဲ့ မိသားစုတှေ အိမျခွမေဲ့တှေ အောကျခွလေူတနျးစားတှထေဲက ကလေးတှပေါ..
Jose Angelo – သူက အသကျ (၉)နှဈအရှယျရှိတဲ့ Pia လို့အမညျရတဲ့ ကလေးမလေးရဲ့ ဖခငျတဈဦးသူ့သမီးလေးရဲ့ အခေါငျးကို ဂူသှငျးပွီး အိမျအပွနျအလာ.. အကွောငျးတဈခုကွောငျ့ ရဲတှရေဲ့ လကျက လှတျမွောကျအောငျထှကျပွေးရငျး မလှတျနိုငျတဲ့အဆုံး .. သူ့ရဲ့ ပိုကျဆံအိတျကို အမှိုကျကားထဲပဈထညျ့ကာ အဖမျးခံခဲ့ပါတယျ။
အဲဒိနောကျမှာတော့ Jose Angelo က စဈဆေးမေးမွနျးခံရငျး အနှိပျစကျခံရကာ သဆေုံးသှားခဲ့ပါတယျ။သူ့ရဲ့ ပိုကျဆံအိတျကိုတော့ Raphael က အမှိုကျပုံမှာ အလုပျလုပျနရောက တှရှေိ့ခဲ့ပွီး Gardo နဲ့ အတူ အထဲမှာ ပါရှိတဲ့ ပိုကျဆံ 300 ခနျ့ကို ခှဲဝသေုံးစှဲလိုကျပါတယျ။ရဲတှကေ Raphael တို့နထေိုငျရာသို့ ရောကျရှိလာပွီး ပိုကျဆံအိတျကို လိုကျလံရှာဖှပေါတော့တယျ။
ပိုကျဆံအိတျထဲမှာ ငှတှေအေမြားကွီးမပါသလို အခွားအဖိုးတနျပစ်စညျးဘာမှ မပါပမေယျ့ ပိုကျဆံအိတျရှာတှတေဲ့သူကို ထုတျပေးမယျ့ ဆုငှကေ မကျလောကျစရာဖွဈနတေဲ့အတှကျ Raphael နဲ့ Gardo တို့က Rat နဲ့ ပေါငျးပွီးပိုကျဆံအိတျပိုငျရှငျအကွောငျးကို စုံစမျးကွပါတော့တယျ။
သူတို့ မြှျောလငျ့တာက ဒီပိုကျဆံအိတျကို အရငျးပွုပွီး ဆုငှထေကျ ပိုပွီးမြားတဲ့ အကြိုးအမွတျရရှိနိုငျဖို့ပါ။အဲဒီနောကျမှာ သိခဲ့ရတာတော့ သူတို့ ပတျသကျနမေိတာက လကျရှိအာဏာရ နိုငျငံရေးသမား Santos ရဲ့ မသမာတဲ့လုပျရပျတှေ… အမှိုကျထကျပိုညဈပတျနံစျောနတေဲ့ လုပျရပျတှကေို စုစညျးထားတဲ့ စာအုပျတဈအုပျရယျ… မသနျ့ရှငျးတဲ့ ငှတှေရေယျ..
ဒါတှကေို အသဲအသနျပွနျလိုခငျြနတေဲ့ Santos နဲ့ သူ့ရဲ့ လကျပါးစေ အငျအားကွီး လူတဈစုရဲ့ အရှုပျတျောပုံဆိုတာပါပဲ။ရဲတှကေ စုံစမျးမေးမွနျးရငျနဲ့ Raphael တို့ကို သံသယဝငျသှားတာကွောငျ့ Raphael ကို ပိုကျဆံအိတျဘယျမှာရှိတယျဆိုတာကို စဈမေးဖို့ ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားပါတော့တယျ။
သူတို့လို အမှိုကျကောကျတဲ့ ကလေးသာသာ လူငယျလေး(၃)ယောကျက အာဏာရှိနိုငျငံရေးသမားတဈယောကျရဲ့ အာဏာတညျမွဲဖို့အတှကျ သူ့လုပျရပျတှကေို လိုကျလံဖုံးဖိနတောကို ဘယျလိုမြား ခုခံနိုငျစှမျးမလဲ…သူတို့ဘကျမှာရှိနတောက သူတို့ကို စာသငျပေးတဲ့ စတေနာ့ဝနျထမျး အမရေိကနျနိုငျငံသူ ဆရာမလေး ၊
နောကျပွီး ဘာသာတရားကို ကိုငျးရှိုငျးတတျဖို့ ဖခငျသဖှယျမတ်ေတာနဲ့ ကွငျနာတဲ့ ဘုနျးတျောကွီးဆိုတော့ကာ…Raphael, Gardo, နဲ့ Rat တို့တတှေ မသမာသူလူတဈခုလကျထဲက လှတျမွောကျနိုငျပါ့မလား….သူတို့အတှကျ မနကျဖွနျဆိုတာရှိနိုငျပါ့အုနျးမလားဆိုတာ….
ဒီဇာတျကားကို The Hours (2002) / The reader (2008) အစရိုတဲ့ ဇာတျကားကောငျးတှကေို ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ Director Stephen Daldry ကရိုကျကူးထားပွီး rating အနနေဲ့ကတော့ IMDb 7.1/10 နဲ့ Rotten Tomatoes 64 % ရရှိထားပါတယျ။
ပုံမှနျ Crime/ Action / Thriller ကွညျ့နကွေသူတှလေညျး ဒီဇာတျကားကွညျ့မိရငျ ဗီလိနျရဲ့ အခနျးကဏ်ဍအားနညျးနတောကို သတိထားမိမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ဇာတျကားတဈခုလုံးက Drama ဘကျကို အသားပေးပွီးရိုကျကူးထားတာကွောငျ့ အဓိက ပေးခငျြတဲ့ Message ကို တော့ရရှိမှာပါ။
ဇာတျကားထဲမှာ ကလေး(၃)ယောကျလုံးက အမှိုကျကောကျစီးပှားရှာရငျး ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျရပျတညျကွတဲ့ ကလေးငယျတှဖွေဈသလို.. ကငျြလညျကကျြစားရတဲ့ ပတျဝနျးကငျြ ကွောငျ့ရော.. ကလေးတှကေ အရှယျနဲ့မလိုကျအောငျ လူရညျလညျကွပါတယျ။
စီးပှားကိုခကျခဲပငျပနျးစှာရှာဖှနေရေတာကွောငျ့လညျး ငှတေနျဖိုးကို သိတတျနားလညျကွသလို လူကွီးတှမှောရှိတတျတဲ့ လောဘလညျး ရှိကွပါတယျ။ဒါပမေယျ့ သူတို့ဟာ စီးပှားရှာသလို တဈဖကျကလညျး ဘုရားကြောငျးပုံမှနျတကျကွတဲ့ကလေးငယျတှပေါ..
လူကွီးတှလေို ဘာသာရေးကိုငျးရှိုငျးတာမြိုးမရှိတောငျ ဘုရားသခငျရဲ့ အသံကို နားထောငျတတျကွတဲ့ ကလေးငယျတှလေဲဖွဈပါတယျ။တဈခြို့နရောတှမှော သူတို့ရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ ပေးဆပျမှုတှဟော.. သာမနျလူကွီးတဈယောကျတောငျ ဆုံးဖွတျဖို့ခကျခဲတဲ့အရာတှပေါ..
ဒီဇာတျကားကိုကွညျ့ရှုခွငျးအားဖွငျ့ ကြှနျတျောတို့ကို ကလေး(၃)ယောကျက အမြားကွီးသငျပွပေးသှားပါတယျ။
အမှိုက်ပုံက ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်… အမှိုက်ပုံမှာစပြီး ဘယ်မှာဆုံးမယ်ဆိုတာတော့….ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အဓိက ဇာတ်လိုက်တွေကတော့ အမှိုက်ပုံက ပြန်အသုံးဝင်မယ့် ရောင်းလို့ရမယ့် ပစ္စည်းလေးတွေကို ရှာဖွေရင်း အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့ အသက်(၁၄)နှစ်အရွယ် Raphael, Gardo, နဲ့ Rat လို့ အမည်ရတဲ့ ကောင်လေး(၃)ယောက်ပါ။
Raphael, Gardo, နဲ့ Rat တို့ဟာ တစ်မြို့လုံးရဲ့ အမှိုက်များလာရောက်စုပုံရာ အမှိုက်ပုံ အနီးအနားမှာ ကျူးကျော်နေထိုင်လျက်ရှိကြတဲ့ မိသားစုတွေ အိမ်ခြေမဲ့တွေ အောက်ခြေလူတန်းစားတွေထဲက ကလေးတွေပါ..
Jose Angelo – သူက အသက် (၉)နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Pia လို့အမည်ရတဲ့ ကလေးမလေးရဲ့ ဖခင်တစ်ဦးသူ့သမီးလေးရဲ့ အခေါင်းကို ဂူသွင်းပြီး အိမ်အပြန်အလာ.. အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် ရဲတွေရဲ့ လက်က လွတ်မြောက်အောင်ထွက်ပြေးရင်း မလွတ်နိုင်တဲ့အဆုံး .. သူ့ရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို အမှိုက်ကားထဲပစ်ထည့်ကာ အဖမ်းခံခဲ့ပါတယ်။
အဲဒိနောက်မှာတော့ Jose Angelo က စစ်ဆေးမေးမြန်းခံရင်း အနှိပ်စက်ခံရကာ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုတော့ Raphael က အမှိုက်ပုံမှာ အလုပ်လုပ်နေရာက တွေ့ရှိခဲ့ပြီး Gardo နဲ့ အတူ အထဲမှာ ပါရှိတဲ့ ပိုက်ဆံ 300 ခန့်ကို ခွဲဝေသုံးစွဲလိုက်ပါတယ်။ရဲတွေက Raphael တို့နေထိုင်ရာသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ပိုက်ဆံအိတ်ကို လိုက်လံရှာဖွေပါတော့တယ်။
ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ငွေတွေအများကြီးမပါသလို အခြားအဖိုးတန်ပစ္စည်းဘာမှ မပါပေမယ့် ပိုက်ဆံအိတ်ရှာတွေ့တဲ့သူကို ထုတ်ပေးမယ့် ဆုငွေက မက်လောက်စရာဖြစ်နေတဲ့အတွက် Raphael နဲ့ Gardo တို့က Rat နဲ့ ပေါင်းပြီးပိုက်ဆံအိတ်ပိုင်ရှင်အကြောင်းကို စုံစမ်းကြပါတော့တယ်။
သူတို့ မျှော်လင့်တာက ဒီပိုက်ဆံအိတ်ကို အရင်းပြုပြီး ဆုငွေထက် ပိုပြီးများတဲ့ အကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်ဖို့ပါ။အဲဒီနောက်မှာ သိခဲ့ရတာတော့ သူတို့ ပတ်သက်နေမိတာက လက်ရှိအာဏာရ နိုင်ငံရေးသမား Santos ရဲ့ မသမာတဲ့လုပ်ရပ်တွေ… အမှိုက်ထက်ပိုညစ်ပတ်နံစော်နေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို စုစည်းထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ရယ်… မသန့်ရှင်းတဲ့ ငွေတွေရယ်..
ဒါတွေကို အသဲအသန်ပြန်လိုချင်နေတဲ့ Santos နဲ့ သူ့ရဲ့ လက်ပါးစေ အင်အားကြီး လူတစ်စုရဲ့ အရှုပ်တော်ပုံဆိုတာပါပဲ။ရဲတွေက စုံစမ်းမေးမြန်းရင်နဲ့ Raphael တို့ကို သံသယဝင်သွားတာကြောင့် Raphael ကို ပိုက်ဆံအိတ်ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကို စစ်မေးဖို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်။
သူတို့လို အမှိုက်ကောက်တဲ့ ကလေးသာသာ လူငယ်လေး(၃)ယောက်က အာဏာရှိနိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ အာဏာတည်မြဲဖို့အတွက် သူ့လုပ်ရပ်တွေကို လိုက်လံဖုံးဖိနေတာကို ဘယ်လိုများ ခုခံနိုင်စွမ်းမလဲ…သူတို့ဘက်မှာရှိနေတာက သူတို့ကို စာသင်ပေးတဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမေရိကန်နိုင်ငံသူ ဆရာမလေး ၊
နောက်ပြီး ဘာသာတရားကို ကိုင်းရှိုင်းတတ်ဖို့ ဖခင်သဖွယ်မေတ္တာနဲ့ ကြင်နာတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးဆိုတော့ကာ…Raphael, Gardo, နဲ့ Rat တို့တတွေ မသမာသူလူတစ်ခုလက်ထဲက လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား….သူတို့အတွက် မနက်ဖြန်ဆိုတာရှိနိုင်ပါ့အုန်းမလားဆိုတာ….
ဒီဇာတ်ကားကို The Hours (2002) / The reader (2008) အစရိုတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Director Stephen Daldry ကရိုက်ကူးထားပြီး rating အနေနဲ့ကတော့ IMDb 7.1/10 နဲ့ Rotten Tomatoes 64 % ရရှိထားပါတယ်။
ပုံမှန် Crime/ Action / Thriller ကြည့်နေကြသူတွေလည်း ဒီဇာတ်ကားကြည့်မိရင် ဗီလိန်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍအားနည်းနေတာကို သတိထားမိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးက Drama ဘက်ကို အသားပေးပြီးရိုက်ကူးထားတာကြောင့် အဓိက ပေးချင်တဲ့ Message ကို တော့ရရှိမှာပါ။
ဇာတ်ကားထဲမှာ ကလေး(၃)ယောက်လုံးက အမှိုက်ကောက်စီးပွားရှာရင်း ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်ကြတဲ့ ကလေးငယ်တွေဖြစ်သလို.. ကျင်လည်ကျက်စားရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ကြောင့်ရော.. ကလေးတွေက အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် လူရည်လည်ကြပါတယ်။
စီးပွားကိုခက်ခဲပင်ပန်းစွာရှာဖွေနေရတာကြောင့်လည်း ငွေတန်ဖိုးကို သိတတ်နားလည်ကြသလို လူကြီးတွေမှာရှိတတ်တဲ့ လောဘလည်း ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ စီးပွားရှာသလို တစ်ဖက်ကလည်း ဘုရားကျောင်းပုံမှန်တက်ကြတဲ့ကလေးငယ်တွေပါ..
လူကြီးတွေလို ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတာမျိုးမရှိတောင် ဘုရားသခင်ရဲ့ အသံကို နားထောင်တတ်ကြတဲ့ ကလေးငယ်တွေလဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချို့နေရာတွေမှာ သူတို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ပေးဆပ်မှုတွေဟာ.. သာမန်လူကြီးတစ်ယောက်တောင် ဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေပါ..
ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကို ကလေး(၃)ယောက်က အများကြီးသင်ပြပေးသွားပါတယ်။